Akụkọ - A na -atụ anya na ụlọ ọrụ ngosi LED ga -anabata mweghachi arụmọrụ, ngwaahịa dị elu ga -agbasawanye akụkụ uru.
A na-atụ anya na ụlọ ọrụ ihe ngosi LED ga-anabata mweghachi arụmọrụ, ngwaahịa dị elu ga-agbasawanye akụkụ uru.
A na -atụ anya na ụlọ ọrụ ihe ngosi LED ga -eweta oge mweghachi arụmọrụ. Dabere na akụkọ ọhụrụ nke Trend Force, nzukọ nyocha ahịa, a na-atụ anya na uru mmepụta ihe ngosi LED ga-abawanye site na 13.5% kwa afọ ruo $ 6.27 ijeri na 2021.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ọrịa na-efe efe ga-emetụta ahịa ngosi ihe ngosi LED zuru ụwa ọnụ na 2020, ọnụ ahịa mmepụta ya ga-erute naanị ijeri US $ 5.53, mbelata afọ na 12.8%. Mbelata nke chọrọ na Europe na United States bụ nke kacha pụta ìhè. N’afọ 2021, ka ọnụ ahịa ahịa na -adịwanye elu, ọnụ ahịa akụrụngwa dị elu na -abawanye n’ihi ụkọ, ndị na -emepụta ihe ngosi LED ga -abawanye ọnụ ahịa ngwaahịa ha n’otu oge. N'afọ a, a na -atụ anya ka nrụpụta nke ahịa ihe ngosi LED ga -ebili.
N'etiti ụlọ ọrụ ndị isi, Leyard kpughere amụma mkpesa ọkara afọ, yana oke uru maka ọkara mbụ nke afọ a bụ nde yuan 250-300, ma e jiri ya tụnyere nde yuan 225 n'otu oge ahụ n'afọ gara aga. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, ọchịchọ ahịa ngosi ụlọ na -aga n'ihu na -adị ike, ọnụ ọgụgụ iwu ọhụrụ bịanyere aka na ọkara mbụ nke afọ abawanyela nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere otu oge n'afọ gara aga. Ruo ugbu a, ọnụ ọgụgụ iwu ọhụrụ esiri n'aka nke mba ofesi gaferekwa n'otu oge ahụ n'afọ gara aga.
Dị ka Trend Force, onye nyocha Great Wall Securities Zou Lanlan nyekwara nduzi dị mma. Onye nyocha ahụ wepụtara akụkọ nyocha na Mee 26, na -ekwu na ilepụ anya na 2021, a na -atụ anya na ahịa ụlọ ga -aga n'ihu na usoro mgbake na Q4 2020. N'otu oge ahụ, a na -atụ anya na ahịa mba ofesi ga -agbake ka ọrịa na -ebelata . Na 2021, ahịa ngosi LED ga-eru ijeri US dollar 6.13, mmụba afọ na 12%.
Onye nyocha ahụ na-enwekwu nchekwube banyere ụzọ dị elu nke ngosipụta obere LED, na-egosi na ụlọ njikwa, ọfịs ụlọ ọrụ, ụlọ ihe ngosi ngwaahịa na ụlọ nzukọ na-etinye ngwa ngwa obere ngosi ngosi LED ngwa ngwa. N'afọ 2020, megide ndabere nke mbelata nke ihe ngosi LED, mbupu nke obere pitch na ngwaahịa pitch dị mma (nke nwere oke na-akarịghị 1.99mm) ruru nkeji 160,000, mmụba nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% n'afọ, na ọ a na-atụ anya iru nkeji 260,000 na 2021. Mmụba afọ na-afọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 59%, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-enwe oke uto dị elu.
Dabere na data agụ owuru, a na-atụ anya nha ahịa nke ụlọ ọrụ ihe ngosi LED nke China ga-eto ruo ijeri 110.41 na 2023, yana ọnụego uto kwa afọ na 2019-2023 ga-eru 14.8%. N'ime ha, obere ahịa ọkụ LED ga-eru ijeri yuan 48.63 na 2023, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ahịa ahịa LED niile.
N'ọdịnihu, site na mmụba nke nha ngwa nke ngosipụta obere oghere, ngosipụta Obere LED na ngosipụta Micro LED ji nwayọọ nwayọọ mata ngwa buru ibu, a ka nwere ohere buru ibu maka itolite na ụlọ ọrụ ngosi LED.
N'ime ụlọ ọrụ edepụtara, Lijing, mmekorita n'etiti Leyard na Epistar Optoelectronics, malitere ọrụ na Ọktoba 2020, wee bụrụ ntọala nrụpụta igwe Micro LED mbụ nke ụwa. Ugbu a, iwu juputara na agbasawanyela mmepụta tupu oge eruo. Fu Chuxiong, onye nyocha na Galaxy Securities, na-ebu amụma na na 2021, ngwaahịa ụlọ ọrụ Micro LED ga-enweta ego ruru nde yuan 300-400, na ọ ga-ejigide usoro ịbanye n'ime ngwa ngwa n'ọdịnihu.
Mmepe ngwa ngwa nke obere ngosipụta ọkụ LED ewetakwala ohere maka teknụzụ nkwakọ ngwaahịa LED. Nkwakọ ngwaahịa COB nwere uru nke ịdị nfe na ịdị gịrịgịrị, yana nkwụsi ike dị elu maka ngwa ime ụlọ. Dabere na LED n'ime data, dị ka uru nrụpụta nke nkwakọ ngwaahịa LED si dị, uru mmepụta nke ngosi LED bụ ihe dị ka ijeri US dollar 2.14, na mgbada dị 13%. Site na ntozu ntozu nke obere plọg, obere LED na ngwaahịa ndị ọzọ n'ọdịnihu, oke nke uru nrụpụta metụtara ga-eji nwayọ mụbaa.